मानव शरीर गर्न बिजुली वर्तमान को कार्य
विद्युत दुर्घटना बिजुली झटके वा चाप गर्न जोखिम फलस्वरूप एक व्यक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो प्रक्रिया रासायनिक शरीरमा, थर्मल र जैविक प्रभाव, भङ्ग सामान्य जीवन परिणामस्वरूप समयमा।
रगत मा मानव शरीर परिणामहरू र शरीर भित्र समावेश सबै electrolyzed समाधान गर्न बिजुली वर्तमान को रासायनिक कार्य। फलस्वरूप, यो आफ्नो कार्य impairs। जैविक प्रभाव स्नायु प्रणाली को विशेष मा, जीवित कक्षहरूको excitation गर्न जान्छ। फलस्वरूप, त्यहाँ convulsions वा पक्षाघात छन्। केही अवस्थामा, पक्षाघात साँस उपकरण (छाती मांसपेशीमा) र हृदय (बाहिरु निलय मांसपेशी)। यस्तो लक्षण अक्सर मृत्यु नेतृत्व।
मानव गर्न बिजुली वर्तमान तयारी विद्युत बल्न, यांत्रिक क्षति, metallization छाला मा, व्यक्तिगत पुर्जा को घाउ मा व्यक्त गर्न सकिन्छ।
बल्न विशेष गरी प्रत्यक्ष भागहरु संग सम्पर्क को बिन्दु मा, बाहिरी कपडा, छाला मा flames को प्रत्यक्ष प्रभाव भएको बिजुली चाप प्रभाव अन्तर्गत उत्पन्न।
जब एउटा बिजुली चाप ज्वाला उजागर प्रवेश चढाना द्वारा, धातु कणहरु, जस्तै यसको माथिल्लो पत्रहरु मा कारण छाला को उपस्थिति।
यांत्रिक क्षति अचानक समयमा जीव सक्छ involuntary आन्दोलनहरु अचानक विनाश परिणामस्वरूप। यो चोटपटक बहिष्कृत छैन, गिरावट।
गंभीर अवस्थामा, लामो समयसम्म जोखिम र एक ठूलो संग एम्पीयरेज, परिणाम जो हुन्छ स्नायु प्रणाली, साँस को पक्षाघात र हृदय, हुन सक्छ स्पष्ट मृत्यु। यसको प्रकटीकरण कक्षहरू जीवित छन् भन्ने तथ्यलाई र साँस र कुनै नाडी मा निहित। समय र चिकित्सा हेरविचार प्रदान गर्न सही भने, नैदानिक मृत्यु जैविक मा प्रवेश गर्छ। दृश्य मा, मानव शरीर मा बिजुली वर्तमान को प्रभाव रोक्छ पछि, पीडित छाती संकुचन गर्न र प्रदर्शन भने CPR, यसलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ।
हृदयघात वर्तमान हृदय क्षेत्र (हात-हातमा) वा reflexively को स्नायु प्रणाली काम अंगहरु लागि जिम्मेवार को उल्लङ्घनमा मार्फत बाटो साथ बिजुली को खण्ड समयमा मांसपेशी सिधै प्रभाव को एक परिणाम रूपमा उत्पन्न हुन सक्छ।
बिजुली आघात खुलारूपमा। सँगै मानव को lesion वर्तमान प्रवाह को परिमाण र अवधि मा मुख्य रूप निर्भर को डिग्री संग, हालको मूल्य निकायको भोल्टेज र प्रतिरोध मा निर्भर गर्दछ। शरीर, छाला को Tissues भएकोले आन्तरिक अङ्गहरू आफ्नो रासायनिक संरचना धेरै जटिल हो, मानिसहरूलाई मा शरीर प्रतिरोध को मूल्य भिन्न हुन सक्छन्। सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा छाला प्रदान गरिएको छ, विशेष गरी सुक्खा, यो रासायनिक संरचना छ र आफ्नो संरचना कमजोर सञ्चालकको छ। शरीर आवरण moistened छ भने, प्रतिरोध एकदम कम छ।
मा बिजुली वर्तमान को सामान्यतया क्रोध उत्पन्न प्रभाव मानव शरीर एक चर (1 mA 50 hertz, बिजुली को आवृत्ति) वा स्थिर (अप5mA गर्न) वर्तमान मा महसुस गर्न थाल्छ। यी मान मूर्त सीमा भनिन्छ र एक व्यक्ति आफ्नै मा आफ्नो कार्यहरू छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छन् तिनीहरूले कुनै पनि विशेष जोखिम खडा छैन।
5 10 को घाउ जबर्जस्ती mA थप गम्भीर क्रोध उत्पन्न, दुखाइ छ र ऐंठन सजिलै देखिने हुन्छन्। 10 15 milliamps मान्छे अब आफ्नै उम्कन सक्षम गर्न धाराहरु र यस्तो प्रभाव अन्तर्गत लामो समयसम्म जोखिम अप श्वसन पक्षाघात, एक गम्भीर स्थिति हो। यस्तो धाराहरु neotpuskayuschego भनिन्छ।
मानव शरीर गर्न बिजुली वर्तमान को कार्य उच्च मान तीव्र श्वसन गिरफ्तारी, हृदय को मांसपेशी को घाउ कारण बन्दछ। यस महत्त्वपूर्ण गतिविधिको परिणाम शरीर ceases रूपमा, मृत्यु हुन्छ।
को चोट को खुलारूपमा बिजुली को बाटो मा निर्भर गर्दछ। सबैभन्दा सबै को खतरनाक, वर्तमान हात गर्न हात वा खुट्टा देखि पारित गर्दा।
प्रतिरक्षा लोक उपचार कसरी वृद्धि गर्न?
थाइरोइड हर्मोन: स्रोत, विकृति को मूल्य
विधिशास्त्र - एक आवश्यक विज्ञान
मास्को मा सौन्दर्य ओप्टिक्स - जो एक चयन गर्न?
पिट बाहिर काम के हो?
"Kvamatel": प्रयोगको लागि निर्देशन
को भाग्य के हो र यो वास्तवमा अवस्थित कि
फाइलहरू भण्डारण गर्न म कसरी क्लाउड सिर्जना गर्छु? स्थापना र कन्फिगरेसन निर्देशनहरू